Reflecting New Normal
SOUL RIVER | THE CHE BROTHER | THE FORGOTTEN VOICE OF THE MEKONG | THE LINE | THE UNSEEN RIVER MEKONG 2030 isafilm anthology comprising five short stories that envision the future of the Mekong River from different cultural perspectives. Set in the year 2030, it aims to inspire audiences to actively protect this critical life source.
MEKONG 2030 သည် ဇာတ်လမ်းတို ငါးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ကာ မဲခေါင်မြစ်၏အနာဂတ်ကို မတူညီသည့်ယဉ်ကျေးမှုများတွင် အခြေခံသော အမြင်များကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပါသည်။ ၂၀၃၀ပြည့်နှစ်တွင် ဇာတ်တည်ထားကာ၊ ကြည့်ရှုသူပရိတ်သတ်များအား ဘဝ၏အသက်သွေးကြောတစ်ရပ်ဖြစ်သော မဲခေါင်မြစ်ကို ကာကွယ်လိုစိတ်များ ပေါ်ပေါက်လာအောင် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
SOUL RIVER (Directed by Kulikar Sotho)
Soul River isacautionary tale framed asalight- hearted road (or, rather, river) movie. Set in 2030 inaremote northeast region of Cambodia, it urges contemporary audiences to reconsider their at- titudes toward environmental degradation and the impact of climate change on the Mekong basin.
Soul River ဇာတ်လမ်းသည် ပေါ့ပါးစွာ လမ်းပေါ်မှာ (သည်မှာတော့ မြစ်ပြင်မှာ) ခရီသွားကြသည့် ဇာတ်အိမ်ပုံစံမျိုးကို မူတည်ထားသော ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၃၀ပြည့်နှစ် ကမ္ဘောဒီးယား အရှေ့မြောက်ပိုင်းက လူသူအရောက်အပေါက်နည်းပါးသော ဒေသတွင် ဇာတ်တည်ထားပြီး၊ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသအပေါ် သက်ရောက်သည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်များနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာခြင်းကို ခေတ်ပြိုင်အမြင်နှင့် ပြန်လည်စမ်းစစ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
THE CHE BROTHER (Directed by Anysay Keola)
Xe returns to the nearly deserted Mekong fishing vil- lage in which he was raised. There, he intervenes inadispute between his siblings over the ethics of exploiting their elderly mother’s blood. The blood has becomeavaluable commodity toaWestern cor- poration that has been developingacure foradeadly plague outbreak.
ဇီသည် ယခုအချိန်တွင် လူမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သည့် သူမွေးဖွားကြီးပြင်းရာ တံငါရွာလေးသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ ရွာမှာ ဆုံးပါးသွားသော သူတို့အမေ၏ သွေးနှင့်ပက်သက်ပြီး ဇီသည် သူ၏ ညီအကိုမောင်နှမများကြား ဖြစ်ပွားနေသောပဋိပက္ခတွင် ပါဝင်လာရသည်။ လက်ရှိတွင်ကျရောက်နေပြီး မနိုင်မနင်းဖြစ်နေသည့် ပလိပ်ရောဂါကိုကုသနိုင်ရန် အနောက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အစုစပ်ဌာနတစ်ခုမှ ဖော်ထုတ်မယ့်ဆေးအတွက် သူတို့အမေ၏သွေးသည် တန်ဖိုးရှိသော ကုန်ကြမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါသည်။
THE FORGOTTEN VOICES OF THE MEKONG (Directed by Sai Naw Kham)
This film tellsastory of two women fighting to claim their lost spirits’ attachment to the Mekong River, while channeling community resilience toward its protection
သည်ရုပ်ရှင်သည် မဲခေါင်မြစ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် သူတို့၏ ပျောက်ဆုံးနေသော ဝိဉာဉ်များကို ပြန်လည်ရရှိရန် တဦးနှင့်တဦးခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားနေကြသော အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့် မဲခေါင်မြစ်ကိုကာကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသော သူတို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
THE LINE (Directed by Anocha Suwichakornpong)
သတ္တဗေဒဘဝနှင့် မြစ်၏ဝန်းကျင်ဗေဒကို အခြေပြုက အနုပညာဖန်တီးသော အနုပညာရှင်တယောက်သည် သူ၏ပြပွဲအသစ်အတွက် ပြင်ဆင်နေစဉ်၊ အနုပညာရပ်နှင့် ထိုအနုပညာမှကိုယ်စားပြုသော သဘာဝတရားသည် ပေါင်းစည်းသွားကာ၊ မတူညီသော ပုံစံရှိသည့် သိမှုတို့သည် စုဆုံ၍လာကြသည်။
THE UNSEEN RIVER (Directed by Pham Ngoc Lan)
သည်ရုပ်ရှင်မှာ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ခန့် မဆုံဆည်းမိသော ချစ်သူကိုရှာရန် မြစ်ကို ဆန်တက်လာသော သက်လတ်ပိုင်းရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ဇာတ်ကြောင်းနှင့်၊ ထူးဆန်းသောဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အိပ်မပျော်သည့်ရောဂါအတွက် ဖြေဆေးကိုရှာရန် မြစ်ကိုစုန်ဆင်းလာသော လူငယ်အတွဲတစ်တွဲ၏ ဇာတ်ကြောင်းကိုပါ တပြိုင်နက် တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
© 2011-2020 Wathann Film Festival.